Noravan’ny ny polisy tamin-kerisetra ny fihetsiketsehana nataon’ny mpiasan’ny fahasalamana tany Balochistan, Pakistan · Global Voices teny Malagasy
Mangataka fampitaovana ny mpitsabo hiarovana azy ireo
Voadika ny 08 Mey 2020 14:02 GMT
Tamin'ny 6 Aprily 2020, nanao fihetsiketsehana ny mpiasan'ny fahasalamana tao Quetta, renivohitry ny faritany Balochistan, nitaky fitaovana fiarovana (PPE) bebe kokoa ho an'ny mpiasa. Nampiasa kibay ireo polisy nandravana ireo mpanao fihetsiketsehana ary mpiasan'ny fahasalamana miisa 150 teo ho eo no nosamborin'izy ireo.
Misy mararin'ny coronavirus miisa 4.000 any Pakistan ary miasa amin'ny fitaovana izay voafetra ananany ireo mpitsabo matihanina. Raha nomena PPE ny dokotera miasa mivantana amin'ny marary voan'ny coronavirus dia milaza kosa ny mpiasan'ny fahasalamana izay mandray mararin'ny aretina hafa fa noterena hiasa tsy ampy fiarovana izy ireo. Hatreto, mpitsabo miisa 18 no nifindran'ny aretina tao amin'ny faritany teo ampanatontosana ny asany.
Ho valin'ny fisamborana dia niantso fitokonana ny Fikambanan'ny Tanora Mpitsabo ao Balochistan any amin'ny toeram-pitsaboana izay tsy mbola ahitana ny valanaretina manerana ny faritany. Noho ny tsindry nataon'izy ireo, navotsotra ny alatsinainy hariva ireo mpitsabo nosamborina ary niala tao amin'ny tobin'ny polisy rehefa nomen'ny tompon'andraikitra toky fa omena PPE izy ireo. Tamin'ny 7 Aprily, naaton'ireo dokotera ny fitokonana rehefa nanaiky ny hanome fitaovana PPE ary hanalava ny fifanarahana ho an'ny dokotera miisa 533 ny governemanta.
Nanameloka ny fihetsika natao tamin'ny mpitsabo ny Dr. Zafar Mirza, manampy manokana ny praiminisitra amin'ny raharaha fahasalamam-bahoaka ary nomeny toky ny daholobe fa ny fiarovana ny mpiasan'ny fahasalamana no tena laharam-pahamehan'ny governemanta.
Ao anatin'ny ezaka ataon'ny governemanta Pakistaney amin'ny fanomezana kojakoja sy fampitaovana, nanaiky i Shina hanome fanampiana ho an'i Sindh, Gilgit-Baltistan ary Islamabad. Nanaiky hanome fitaovana ara-pahasalamana ihany koa ny governemanta Japoney .
Nanohy ny fanomezana kojakoja ara-pitsaboana — PPE sy ny fitaovana fanaovana fitiliana — ny Fahefana Nasionaly mitantana ny [vonjy] Voina ao Pakistan (NDMA) ary efa tonga avy any Shina ny sasany tamin'izany. Tamin'ny 7 Aprily, nandefa fanampiana hamehana ara-pitsaboana tany Balochistan ihany koa ny Tafika Pakistaney mba ho zaraina mivantana any amin'ny tobim-pahasalamana.
Ny mpiasan'ny fahasalamana no lohalaharana amin'ny ady amin'ny COVID-19 ka mahatonga azy ireo ho mora voan'ny areti-mifindra. Marina izany manerana ny firenena ary mpitsabo miisa roa no maty tany Pakistan hatreto. Niresaka tamin'i Dr. Nauman, anestezista ao amin'ny Hopitaliben'ny Distrika ao an-tanàndehiben'i Dera Ghazi Khan ny Global Voices taorian'ny nahitana azy fa tratran'ny viriosy: